China Kung Pao Chicken fekitari uye vagadziri | Huikang
Kung Pao Chicken inozivikanwa yechinyakare dhishi iyo inozivikanwa kumba uye kunze kwenyika. Inosanganisirwa muShandong chikafu, chikafu cheSichuan, uye chikafu cheGuizhou, uye zvigadzirwa zvaro nemaitiro zvakasiyana. Kwakatangira ndiro iyi kune chekuita nemuto une muto wakasanganiswa muShandong chikafu, uye huku inonaka muGuizhou chikafu. Yakazove yakasimudzwa ikaendeswa mberi naDing Baozhen, gavhuna weShandong naSichuan gavhuna weQing Dynasty, ndokugadzira dhishi nyowani-Gongbao huku. Yakave yakaderedzwa kusvika nanhasi, uye dhishi iri rakaverengerwa sedare redzimhosva reBeijing. Gare gare, Kung Pao Chicken yakapararirawo kunze kwenyika.
Kung Pao Chicken inobikwa nehuku sechinhu chikuru uye inowedzerwa nenzungu, chili nezvimwe zvinobatsira. Dzvuku asi kwete zvinonhuwira, zvinonhuwira asi kwete zvinotyisa, yakasimba zvinonhuwira zvinonaka, nyama yakatsetseka uye yakasviba. Nekuda kwekuravira kwayo kwakanaka, hunyoro hwehuku uye kupenga kwenzungu.
MunaGunyana 2018, yaiverengerwa se "Chinese cuisine" pakati pemakumi gumi emadhishi echinyakare kuGuizhou uye gumi epamusoro echinyakare madhishi muSichuan.
Kung Pao Chicken inozivikanwa nekutapira mune zvinonhuwira uye zvinonhuwira mukutapira. Hunyoro hwehuku nekutsvukirira kwenzungu, mukanwa munonaka uye makrisiti, kutsvuka asi kwete zvinwiwa, zvinonhuwira asi zvisina kusimba, uye nyama inotsvedzerera uye yakatsetseka.
Mushure mekunge huku yeng pao yaunzwa kunze, muromo werurimi unonzwa kunge chiveve uye zvishoma zvinonhuhwirira, uyezve unotapira kumabhuru ekuravira, uye pachave nekumwe kunzwa "kuvava uye kuvava" kana uchitsenga, huku iri pasi pekupisa, zvinonhuwirira, zvinovava uye zvinotapira pasuru, Chitubu hanyanisi, nzungu dzinoita kuti vanhu vade kumira.
Mazita eKuku Pao Huku kwese kwese akafanana, asi nzira dzakasiyana.
Shanduro yeSichuan yeKung Pao Chicken inoshandisa mazamu ehuku. Nekuti mazamu ehuku haasi nyore kuravira, huku iri nyore kuva nyoro uye kwete nyoro. Unofanirwa kurova huku nekumashure kwebanga kakati wandei usati waisa kunaka, kana kuisa muIza rimwe chena, huku iyi ichave yakapfava uye yakapfava. Iyo Sichuan vhezheni yeKung Pao Chicken inofanirwa kushandisa nzungu dzakapfupika uye dzakaomeswa chili mapfundo, uye iyo tambo inofanirwa kunge iri spicy lychee. Chili mutambo wakadzika-wakakangwa uye unonhuwirira, uchiratidza zvinonhuwira.
Shandong cuisine vhezheni yeKung Pao Chicken inoshandisa mamwe huku mahudyu. Kuti ugone kujekesa zvirinani kuravira kweKung Pao huku, Shandong cuisine zvakare inowedzera diced bamboo nhungirwa kana diced bhiza. Muitiro weKung Pao Chicken unenge wakaenzana newaSichuan chikafu, asi kutarisisa kwakanyanya kunopihwa kumhanyisa-kupisa, kuitira kuchengetedza kutsva kwehuku.
Iyo Guizhou vhezheni yeKung Pao Chicken inoshandisa Caba Chili, iyo yakasiyana neshanduro yeSichuan neShandong. Iyo Guizhou vhezheni yeKung Pao Chicken ine munyu uye zvinonhuwira, iyo inotapira zvishoma uye inovava. Ndokumbira utarise kune iro izwi "muto". Kupisa uye kuvava ndeimwe yezvakakosha zviratidzo zvinosiyanisa chikafu cheGuizhou kubva kuSichuan chikafu.
Pashure: Yakanaka Uye Sour Spare Ribs
Zvadaro: Nyuchi Chop Pepper
Yakarukwa Nguruve Yakachengetedzwa